GeekColor: Skin, Wraps & Decals. Manokana gadget »#BeDIFFERENT - GeekColor.com
toetra mahazatra hita
Quality 3M Vinyl. Tsy misy Residues & Bubbles. mahatohitra.
Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny tseka
Laser Cut: Tsara fitondran-tena. Natao tamin'ny 💚 in Espaina.
tsy manam-petra Customization
Ny Design Your Own na misafidy Kolontsaina & Textures an'arivony.
Complete Fitaovana. Easy Fametrahana. miaraka Fandresena taona 2.
Inona ny hoditra?
Ny hodiny no lamaody sy mora ary mahavariana indrindra mba hiarovana sy hanamafisana ny fitaovana rehetra ampiasainao
Nahoana ianao no mitady skin amin'ny fitaovanao? Ireto misy antony vitsivitsy vitsivitsy:
MAHADIANA ny hoditra
Vita avy amin'ny vinyl voankazo avo lenta, izay fitaovana mitovy amin'ny fiara sy ny sisin'ny bisy. Izany dia maharitra!
Izy ireo dia mamefy 5 mil mena (na dimy arivo arivo amin'ny 0.005 inch), izay mahatonga azy ireo ho marefo!
Raha reraka amin'ny hoditrao ianao na te hianatra vaovao iray dia esory fotsiny izany. Ny adhesivantsika manokana dia tsy hamela na inona na inona ho an'ny goo na ny sisa.
MAHASOA ANY AMPY IO
Raha azonao atao ny manisy saribakoly bateria amin'ny fiaranao, dia afaka manamboatra hoditra ianao. Ny hoditray koa dia manana onjam-pehezina ahafahana misoroka ny blasfemia.
SKINY dia natao tany Espaina
Ny hoditra rehetra avy amin'ny GeekColor dia vita eto Espaina (Eoropa). Ny toeram-ponenanay dia ao Toledo.
MAHASOA ANKEHITRINY miaraka amin'ny FOKO, KABARY SY AMPIASAINA
Voafehy ny hodiny mba hifanaraka tanteraka amin'ny rafitra tsirairay - ao anatin'ny .25mm tolotrana. Midika izany fa azo ampiasaina araka ny tokony ho izy ny seranana rehetra, ny fanaraha-maso ary ny fitaovana.
Tianao ve ny telefaona mijery anao amin'ny fitenenana, ary vonona hijery sy hahatsapa ny fahasamihafana misy amin'ny hoditra ianao?
MIFALY NY FOMBA FIJERY AMPIHAROANA
Hanova ny iPhone
»FAHADIOVANA SY EXTRA GRIP
Miaraka amin'ny GeekColor, ankoatra ny fanomezana ny iPhone anao amin'ny fomba manokana, dia hampitombo ny fitondrany ianao raha misintona izany.
Hanova ny Samsung
»Loza ny ankamantatra
Ny Galaxy Samsung dia mofomamy hamenoany ny dian-tànana. Ny fantsika no hohadinoinao mandrakizay.
Ataovy tsy manam-paharoa ny telefaoninao ary jereo ny farany amin'ny endriny farany indrindra.
»TSY MISY ANTSIKA
Arovy tanteraka ny takelakao ary hadinoy ireo marika fampiasa. Aza manahy mikasika ny fampiasana izany raha tsy misy tranga.
Manokana Console Game
Ataovy mifanaraka amin'ny lokon'ny ekipanao ny mpanjifa sy ny solosainao.
»BORED? MIFANDRAY NY LOOKA!
Manana sary vaovao eo amin'ny solosainao. Hatsarao ny endriky ny solosaina findainao miaraka amin'ny sary sy loko maro.
Manokana fitaovana fanampiny
»FIFANEKENA FIFANEKENA, 100% GEEK;)
Manamboatra hoditra ihany koa izahay ho an'ireo gadget malaza sy vaovao: fitaratra, hetsika kamerà ...
Raha tianao izany Unique ary Exclusive, GeekColor is your site.
Manolotra ny Greater Personalization ny fitaovana manokana.
ny hoditra dia natao ary vokarina in Espaina amin'ny tsara indrindra Fahamendrehana sy Premium Premium.
Miaro amin'ny endrika sy Ataovy miavaka ny Gadgets amin'ny GeekColor »#BeDIFFERENT
MITSIDIANA ANAO INSTA SHOP
Fandefasana maimaim-poana mandrakariva amin'ny didy rehetra
Ny sarany tsara indrindra, miantoka
Raha hitanao fa lafo kokoa, dia averinay indray ilay fahasamihafana
FAMPIANARANA AMIN'NY INTERNET 24 / 7
Hamaly ny fanontanianareo fanontaniana 365 andro isan-taona
Home Laharana fandraisana na rohy Mitady InstaShop entana fandoavam-bola miantoka Terms
Page 1 Noforonina tamin'ny Sketch.